FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA BOGLE DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana Bogle Dog
Alika mifangaro mpiady totohondry sy beagle
Ity no fifangaroan'i Nelson the Boxer / Beagle amin'ny 5 taona. Nifindra tany Alemana ny tompony ary voatery naka an'i Nelson Nosedraina ny ADN . Toy ny a Pitbull Terrier ary i Pitbulls dia voarara any Alemana. Niverina ny fitsapana ADN fa Boxer mifangaro amin'ny Beagle izy. Karazana maro no diso anarana hoe Pitbulls fotsiny satria manana takolaka lehibe, misy handriny ary tarehy bika izy ireo, raha ny tena izy dia tsy manana hady velively izy ireo.
Tsy alika madio ny Bogle. Lakroa misy eo anelanelan'ny mpanao ady totohondry ary ny Beagle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Tommy the Bogle (mixer Boxer / Beagle) 5 taona— 'Tommy dia nalaina avy amin'ny Pets & People in Yukon, OK tamin'ny Fetin'ny ray.'
Chelsea the Bogle (Boxer / Beagle mix) alika 8 volana— 'Chelsea no Boxer / Beagle be fitiavana indrindra.'
'Rusty dia fifangaroan'ny Boxer / Beagle. 5 taona izy amin'ity sary ity. Tiany ny milalao kilalao manafintohina. '
laboratoara mainty rhodesianina ridgeback mifangaro
Alika mifangaro mixer (Bogle) Reggie the Boxer / Beagle amin'ny 2 taona
Alaina ny alika mpiady Boxer / Beagle (Bogle) amin'ny 1 taona
Augie the Bogle (Alika mpiady amin'ny Boxer / Beagle) 2 taona ½ taona— 'Tiany ny milalao sy mitsako ny taolany ... afaka miteny ianao fa miaro kely ny taolany !!!'
pekingese sy pomeranian Mix alika kely amidy
'Lollipop, ny zanako beagle / Boxer (Bogle) 8 herinandro dia mifangaro alika kely. Tsara tarehy roa maso manga mety hijanona fotsiny izany - tsy fahita firy izany ?? Hatramin'izao dia tiany ny matory sy misolelaka. HALANY ny any ivelany rehefa mangatsiaka na mando. '
Lollipop zanak'alika mifangaro Beagle / Boxer (Bogle) 8 herinandro
Roxy the tricolor Beagle / Boxer mix (Bogle)
'Xena, mifangaro Beagle / Boxer toy ny alika kely - navotana tamin'ny trano nilaozana izy.'
Mifangaro ao amin'ny 1 1/2 yrs eo ho eo i 'Xena the Beagle / Boxer — ity andriambavy mpiady ity dia tia mangalatra an'i Cheetos ary milalao any ivelany. Very ny orona mavokely rehefa nihalehibe izy, nefa mbola mieritreritra ihany isika fa izy no farany ambany indrindra! Xena dia tovovavy mahafatifaty - tiany ny mi-cuddle ary manome anao ny kitapony. '
Bogle puppy milalao miaraka aminy kilalao
Dakota the brindle Bogle puppy (Boxer / Beagle mix breed dog)
sarina fivontosan'ny sela mast
Dakota ilay alika kely Bogle boribory (alika mpiady boxer / Beagle) miaraka amin'ny kilalaon'ilay tombo-kase.
Fred the Bogle (Alika mpiady amin'ny boxer / Beagle)
Nelson the Nosedraina ny ADN Fangaro mixer Boxer / Beagle amin'ny 5 taona
Nelson ilay ADN notsapaina alika mpiompy Boxer / Beagle tamin'ny taona 5
pitbulls orona mena lehibe loha
Nelson the Nosedraina ny ADN Alika mifangaro amin'ny boxer / Beagle amin'ny 5 taona
aostralianina omby alika (manga heeler) / Labrador retriever Mix
firy ny alika kely ananan'ny manan-dihy lehibe
alika an-tendrombohitra bernese afangaro mpiandry alemanina
shar-pei pitbull mix
chihuahua rat terrier mifangaro alika kely amidy